फिलिप्स Xenium W8500: विनिर्देशों, समीक्षा, अनलक
फिलिप्स मोबाइल उपकरणहरूको लागि बजार मा वर्तमान छैन रूपमा दिग्गज सैमसंग, को लेनोभो वा, भन्नु, एलजी रूपमा महत्वपूर्ण छ। यो बावजुद, यो उच्च गुणस्तरीय स्मार्टफोन उत्पादन गर्न सम्भव छ, मानिसहरूको ठूलो संख्या मांग गर्दै छन्।
यी उपकरणहरू को एक मा, हामी यस लेखमा वार्तालाई पूरा गर्नेछ। तपाईं को सामने पूरा - फिलिप्स Xenium W8500। ग्याजेट यो छ र के यो सुविधा, यस लेखमा पढ्न छ भन्ने तथ्यलाई।
हामी वास्तवमा देखि, सुरु गर्नुपर्छ सायद, त्यो हामीलाई अगाडि - सुरक्षा को IP67 स्तर संग एक वास्तविक स्मार्टफोन। यो उपकरण धूलो, चिस्यान को ingress सामना गर्न र अझै पनि यसको प्रदर्शन कायम गर्न सक्षम छ भन्ने हो। कुनै पनि अतिरिक्त थप विचार मिसिन बिना शिकार, माछा मार्ने, पैदल यात्रा र यति मा ल्याउन सक्रिय रोजगार खेल लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो गर्न थप योगदान को दोस्रो सुविधा - हामी सञ्चालनको लामो अवधि बारेमा कुरा गर्दै छन्।
तपाईंको मोडेल लागि प्राविधिक विनिर्देशों मा निर्माता अनुसार, यन्त्र एकल शुल्क कम्तीमा 3-4 दिन को लागि बाहिर पकड गर्न सक्षम छ। सदस्य 2-3 दिन, पहिले नै एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम मा चल्छ कि एक उपकरणको लागि राम्रो सूचक हो जो भन्छन्। र यो छ - 2400mAh सन्तुलित ब्याट्री खपत क्षमता को खर्च मा।
मोबाइल फोन सक्षमता, यसको प्रोसेसर, क्यामेरा र अन्य मोड्युलहरू सुनिश्चित, हामी लेखमा पछि पत्ता हुनेछ। तर, पनि यो बिना हामी सुरक्षित उपकरण स्मार्टफोन, चरम अवस्थामा प्रयोगको लागि उपयुक्त रूपमा अवस्थित छ भनेर भन्न सकिन्छ - यो के, स्पष्ट, निर्माता राख्दछ छ। साथै, उपकरण आकर्षक स्टाइलिश डिजाइन, जो सामान्य अवस्थामा जोकोहीले आनन्द हुनेछ छ।
फोन देखिन्छ कसरी, हामी हाम्रो विस्तृत कैरेक्टराइजेशन सुरु गर्नेछौं। त्यसैले, फिलिप्स Xenium W8500 एक विशिष्ट "ईटा" को रूप मा छ। आफ्नो बाटो मा तपाईं अन्य बीचमा व्यापक फेला हुनेछ सुरक्षित फोन उज्ज्वल रंग को ठूलो रबर प्लग र एक अविश्वसनीय बाक्लो गिलास जस्तै तत्व। होइन, उपकरणको भाग मा राम्रो चिटिक्क, शान हुनत यो मा त छैन धेरै देखिन्छ। शरीर फ्रेम को परिधि अनुसार अप 8.5 मिमि एक मोटाइ छ। उपकरणको फिर्ता गर्न बह गरिनेछ चिल्लो संक्रमण तिनीहरूलाई - उहाँले एक सीधा अनुहार छ, तर तपाईंले आफ्नो हात मा स्मार्टफोन लिन भने यदि रूपमा देखिन्छ।
मामला फिर्ता कवर मा एक राहत बनावट भएको टिकाउ प्लास्टिक सामाग्री बनेको छ - सामाग्री सन्दर्भमा ठाउँ फिलिप्स Xenium W8500 यस्तो उपकरणहरू को निर्माताहरु को त रुचाउनु छ एल्यूमीनियम, फेला गर्दैन उल्लेख गर्नुपर्छ। कारण यो गर्न, माथि फोन छान्न र उसलाई धेरै खुसी काम। यो प्लास्टिक यसलाई व्यावहारिक अदृश्य खरोंच छ जो एक संरचना छ। को topsheet गाढा लुकाउने कोटिंग हल्का खैरो संरचना अन्तर्गत।
मात्र तीन शारीरिक नेभिगेसन बटन मा, तपाईं शरीर हेर्न सक्नुहुन्छ - एक (लक स्क्रिन) उपकरणको शीर्ष पक्षमा स्थित छ, अन्य दुई (मात्रा कुञ्जीहरू) दाँया तिरको आफ्नो स्थान पाएका छन्। हेडफोन र चार्जर कनेक्टर एक रबर सटर रंग संग मधुर स्वर फोन को समग्र अवधारणा मा आफ्नो फिट गर्न बन्द गरिएको छ।
को निर्माताहरु द्वारा भन्यो, फोन फिलिप्स Xenium W8500 मा माउन्ट छ कि स्क्रीन, 4.3 इन्च को एक विकर्ण छ। सुरक्षा ग्लास ढाकिएको प्रदर्शन धक्का र खरोंच देखि आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गोरिल्ला ग्लास। यस्तो कोटिंग धेरै मोडेल मा प्रयोग गरिन्छ, र यो खरोंच देखि आफ्नो स्मार्टफोन स्क्रिनमा कसरी राम्रो सुरक्षा मा, विवाद सञ्चालन छन्। यो ग्लास मात्र हो कि क्षति को likelihood कम गर्छ, तर पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दैन विश्वास छ।
फिलिप्स Xenium W8500 लागि संकल्प चित्रहरु छोड्दा चाहेको गर्न धेरै - यो द्वारा 540 पिक्सेल 960 को आकार बारे छ। सामान्यतया, स्क्रीन स्मार्टफोन मात्र 16 लाख रंग पारित गर्न सक्षम छ त, TFT आधारमा संचालित। बरु, छवि घनत्व प्रसन्न तुल्याउन सक्छौं - यो प्रति इन्च 256 पिक्सेल छ।
को "भराई" को लागि जस्तै, महिमा गर्न आफ्नो काम को परिणाम काम गर्ने छैन। को वर्णन द्वारा प्रमाणित फिलिप्स Xenium W8500 प्रतिक्रिया उपकरण अक्सर "बाहिरै" गर्न र थप बिस्तारै तपाईं आशा भन्दा काम सुरु हुन्छ। यो पुष्टि गर्न हामी यो मोडेल फेला पार्न सक्ने समीक्षा। कि नयाँ स्मार्टफोन तपाईं वा छैन, यो असफल हुनेछ बिना यसको लागि तयार हुन।
कारण अनुचित विधानसभा फोन कुनै केही प्रकारको छैन। यो कुरा के प्रोसेसर यहाँ प्रयोग गरिएको छ, छ। यसलाई - Snapdragon S4 प्ले जो छ दुई कोर 1.2 GHz मा clocked MSM8625। कारण यो गर्न, यन्त्र धेरै बिस्तारै, "जम्छ" जब केही आवेदन संग काम काम गरिरहेको छ पनि। यस जोर धेरै समीक्षकहरू स्थानहरूलाई।
पहिले नै निर्माता, एक हार्डी रूपमा फोन स्थिति छन् undemanding एकाइ (ऊर्जा खपत को मामला मा), माथि संकेत गर्नुभयो। यो ब्याट्री जसको क्षमता 2,400 mAh छ, योगदान पुग्छ। हामी माथि उल्लेख गरेका छन् रूपमा, व्यवहार उपकरण सक्रिय प्रयोग 2-3 दिन रोक्नु चार्ज अघि सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ। हामी विभिन्न hikes कुरा भने बस अपरिहार्य गुणस्तर, प्रकृति, चरम खेल र यति मा यात्रा - र यो छ।
, दैनिक जीवन सहित यो एक राम्रो बोनस छ - हामी यन्त्र मालिक यस्ता कुराहरू सामना छैन मान्छु भने पनि, धेरै सम्भावना फोन एक लामो समय को लागि चार्ज छैन। तर, केही समीक्षा उपकरण हुँदा पनि फिलिप्स अन्य मोडेल संग तुलना, पर्याप्त कठिन छैन भन्छन्।
ब्याट्रि निर्मित छ, त्यसैले यो केवल सेवा केन्द्र मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
Xenium मा W8500 को चेसिस को अगाडि र पछाडिको दुई क्यामेरा छ। पहिलो परंपरागत यो साथै "स्काइप" मा भिडियोको लागि प्राथमिक तस्वीर ( "Selfie") बनाउनको लागि अभिप्रेरित रूपमा, तल्लो संकल्प म्याट्रिक्स छ। दोस्रो गम्भीर मापदण्डहरु (म्याट्रिक्स 8 मेगापिक्सेलको को एक संकल्प छ), 3265 2448 पिक्सेल को एक संकल्प मा तस्बिरहरू उत्पादन गर्न सक्छन् जो मार्फत छ।
निस्सन्देह, यो W8500 पनि सिर्जना र भिडियो गर्न सकिन्छ। विशेष मा, हामी MPEG4 ढाँचामा विज्ञापनहरु (रेकर्डिङ गति प्रति सेकेन्ड 30 फ्रेम छ) बारे कुरा गर्दै छन्।
कारण सञ्चालन प्रणाली र हार्डवेयर, स्मार्टफोन निर्माण गरिएको छ जो, यन्त्र लगभग सबै भन्दा साधारण मल्टिमिडिया स्वरूप खेल्न सक्षम छ। विशेष, यो हुन सक्छ र चलचित्र HD गुणस्तरीय, र सबै अडियो फाइलहरू, र पनि एक रेडियो प्ले काम। रेडियो सुन्न, खैर, फोन हेडसेट जडान गर्न हुनेछ - यो केवल संकेत प्राप्त गर्न एन्टिनाको प्रयोग गर्नेछ।
स्मार्टफोन फिलिप्स Xenium W8500 सबै आवश्यक संचार अन्य निर्माताहरु यन्त्रहरू अन्य मोडेल निहित छन् भनेर क्षमताहरु छ। यो मुख्यतया विभिन्न नेटवर्क को जीएसएम-नेटवर्क, साथै वैकल्पिक3जी-मोबाइल इन्टरनेट पहुँच काम छ। उपकरणको मद्दत उच्च गतिको वायरलेस इन्टरनेट जडान काम गर्न सक्ने क्षमता छ संग: अझै पनि यो सम्भव वाइफाइ-मोड्युल उपस्थिति ध्यान दिनुहोस् छ। साथै, जस्तै फिलिप्स Xenium W8500 बताइरहेका द्वारा औंल्याए फोन प्रसारित र फाइलहरू प्राप्त गर्न गर्दछ जो ब्लुटुथ, छ विशेषताहरु।
अन्तमा, ठाउँ मा क्षेत्र मा devaysa स्थानहरू निर्धारण को समारोह, साथै अभिमुखीकरण कार्य मोड्युल एक जीपीएस। तपाईं एउटा अपरिचित क्षेत्रमा यात्रा गर्न मोडेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, वा कहाँ हराएको रही एक संभावना छ यात्रा यो सुविधा विशेष गरी उपयोगी छ।
उपकरणको सञ्चालन बारेमा थप जान्न, हामी को ग्राहकहरु बायाँ समीक्षा विश्लेषण गरेका छन्। सक्दैन, सकारात्मक - दुर्भाग्यवश, कि तिनीहरू सबै भन्दा भन्न। अधिकांश मानिसहरू फोन स्तर "3" एक मात्रा मा मा एक औसत मूल्याङ्कन राखे। र यो कारण, यसलाई बन्द रूपमा, त्यहाँ एकदम महत्वपूर्ण हो।
पहिलो, धेरै खरीदारों एक मोड्युल प्रणाली को धेरै malfunctions बारेमा भन्छन्। उदाहरणका लागि, कसैले काम गरिरहेको छैन ब्लुटुथ, र कसैले सबै फिलिप्स Xenium W8500 समावेश छैन complains। विभिन्न तरिकामा यो संग संघर्ष: पुन फर्मवेयर, अन्य उपकरणको भागहरु प्रतिस्थापन, कारखाना सेटिङहरूमा रिसेट गर्नुहोस्। प्रणाली यसका निस्कनुहोस् पूरा - दोश्रो, धेरै समीक्षा को सबै भने, एक समारोह एक गिरावट संकेत गर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं अनलक गर्दा प्रदर्शन केही दिन्छ फिलिप्स Xenium W8500: "गलत ग्राफिकल पासवर्ड"। यो सन्देश पहिचान संयन्त्र ग्राफिक सुरक्षा भङ्ग संकेत गर्दछ। यसलाई समाधान गर्न, तपाईं पासवर्ड पहिले सेट तल ल्याउन, कारखाना सेटिङहरूमा एउटा फिर्ती बनाउन आवश्यक छ। समस्या, र वास्तव मा मोडेल फिलिप्स Xenium W8500 धेरै (अनलक - छैन केवल एक)। त्यसैले सम्भव malfunctions लागि तयार हुन।
समीक्षा बाँकी राम्रो - यो मोडेल, यसको सुरक्षा गुण बिगार्न थियो कसरी कठिन बारेमा कुरा। ब्याट्री र धीरज खरीदारों फोन एक लामो समय को लागि सक्रिय हुन सक्ने क्षमता छ भनेर लेख्न बारेमा - वास्तवमा, यो (जबकि सामान्य एन्ड्रोइड सामान्य मोडमा मात्र एक दिन पछिल्लो हुनेछ)2दिन अलि गुमाएको छ। लाभ छ, तर यो विकासकर्ताले भन्न रूपमा महत्वपूर्ण छैन।
मोडेल के हो? यो छ - एक सस्ती स्मार्टफोन (यसको मूल्य, समीक्षा अनुसार, 2013 मा समय मा बारे 10.5 हजार rubles थियो), मानक उपकरण मा निहित छन् भनेर धेरै सुविधाहरू छ। प्रदर्शन को लागि यो स्पष्ट छैन मात्र "flagships" पछि छ - सैमसंग, एसस, HTC र लेनोभो, तर पनि केही चिनियाँ फोन, देखि जो लागत धेरै कम छ। प्लस वर्तमान काम ढाँचाहरू, इमानदार हुन, सही सकिन्छ। तर शीर्ष-अन्त मिसिन मा यो सबै "सी ग्रेड" को अधिकतम ड्र, ध्यान योग्य - धेरै असफल, केही कार्यहरु को विफलता, साना त्रुटिहरू अप सञ्चालन समयमा popping।
तपाईं उत्पादनहरु फिलिप्स रुचि राख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एक स्मार्टफोन, पाठ्यक्रम, तपाईं किन्न। तर पनि यो ब्रान्ड W8500 अन्य मोडेल तुलनामा एक बिट ठंड उदाहरणका छ।
Explay3जी हिट: ग्याजेट विवरण
कसरी धेरै आईफोन5गर्छ - मूल्य घटक
कसरी "आईफोन" मा भिडियो डाउनलोड गर्न विवरणहरू
कसरी iPhone मा एप्पल आईडी उतारना गर्न: सुझाव, सल्लाह, निर्देशन
सैमसंग GT-C3592 को एक विस्तृत समीक्षा
ब्लूबेरीको साथ घर का बना भत्किएको - गर्मीको मिठाई
रक्तचाप: 120 भन्दा बढी 60 - आदर्श वा अस्वीकार?
घरेलु बन्दोबस्त "सेतो बीच" को मास्को क्षेत्र मा: समीक्षा, मूल्यहरू
TU 22m3: विमान विनिर्देशों (फोटो)
कार लागि कंडीशनर क्लीनर फोम
USB उपकरण वर्णनकर्ता अनुरोध असफल भयो: कारण के हो? ह्यान्डल अनुरोध किन विफल भयो?
एक बाल दन्त चिकित्सक कसरी चयन गर्ने? मेट्रो नजिकै सबै भन्दा राम्रो छोराछोरीको दन्त चिकित्सा
Brezhnev, आफ्नो सुधार को ऐतिहासिक पोर्ट्रेट। Brezhnev को राजनीतिक पोर्ट्रेट (छोटकरीमा)
मञ्चमा ब्रुस ली जीवन र मृत्युको छोरा